भुकम्प र कोरोनाको झल्को मेटाउने मलमपट्टिका डाक्टर रविन्द्र पाण्डे , – Ranga Darpan
भुकम्प र कोरोनाको झल्को मेटाउने मलमपट्टिका डाक्टर रविन्द्र पाण्डे ,
वैशाख १२ ,काठमान्डौ – नेपालमा गएको महामारी विनाशकारी भूकम्पको आज पाँच वर्ष पुगेको छ । प्रतेक वर्षको वैशाख १२ गते नेपालीको लागि कालो दिनमा गनिन्छ ।
२०७२ साल बैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रविन्दु भई विनासकारी भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले करोडौ नेपालिको जीवन तहसनहस पारेको थियो ।
भूकम्पमा परि झन्डै १० हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।लाखौँ घाइते भएको तथा लाखौँ घर,बिद्यालय ध्वस्त गरेको त्यो प्रलयकारी महाभूकम्प बितिको आज ठिक ५ वर्षमा जना स्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे समिर यस्तो बताउछन ।
उक्त समयमा भूकम्पमा घाईते अपाङ्ग जुन अतिप्रभावित जिल्ला छन् तेस्ता १० जिल्लाका करिब ६० हजार गाँउमा पाण्डे निशुल्क शिबिर लगेर गएका थिए ।
भग्नावशेष, चौर, बाटो, स्कुल आदिमा बसेर ३ महिनामा नौ हजारभन्दा धेरै घाइते तथा पीडित जनतालाई सेवा दिएको समिरलाई अहिले पनि ताजै सम्झना छ ।
भूकम्प संगसंगै गाउँवस्तीमा पुग्नु जोखिमयुक्त काम थियो । निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर चलाउँदा धेरै गाउँमा रातको ११ बजेसम्म भोकै बिरामी जाँचेर, औषधि दिएर तथा हृदयविदारक ठाउँमा राहत उपलब्ध गराएर त्यो ३ महिना बिताएको उनले जानकारी गरे ।
त्यति मात्र हैन बिकट गाउँमा न्यानो कपडा वितरण, सरसफाई तथा पोषण सामग्री वितरण, बिध्यार्थिहरुलाई स्टेसनरी तथा ब्याग वितरण, भूकम्पले टुहुरा भएका बालबालिकालाई पढाइको ब्यबस्था, मनोपरामर्श सेवा लगायतका काम गरेको उनि बताउछन ।
३ महिना रातदिन खट्ने त्यो शक्ति कसरी प्राप्त भए होला ? डर किन नलागेको होला ? ऋणको डर किन नलागेको होला ? त्यो अभियानमा सहयोग, हौसला र प्रेरणा दिने महानुभावप्रति आफु आभारी रहेको समेत उनले ब्यक्त गरेका छन् ।
केटाकेटी घरमा एकलै छोडेर आफु दीपा, र सहयोगी भाइ दिवस त्यो समरमा भिडेको र त्यो समयमा आत्मीय मित्रहरु र स्थानीय पीडितको अमूल्य माया कहिल्यै नबिर्सन सकिने क्षण रहेको उनले सम्झना स्वरुप बताए ।
त्यो भयानक घटनाको यात्रालाई लिपिबद्ध गरेर ‘ भुकम्पमा मल्हमपट्टी ‘ नामक संस्मरणात्मक पुस्तक पनि डा पाण्डेले लेखेका छन्।
समिरले त्यस भूकम्पमा परी आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाउनु भएका सबै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको स्मरण र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त पुस्तकले २०७३ सालको उत्तमशान्ति पुरस्कार पाएको थियो । सबैको माया, हौसला तथा अपनत्वको कारण देशलाई संकट परेको बेलामा आज १२ गते भुकम्पको सम्झनामा समर्पण गर्दै पाण्डेले उक्त पुस्तकलाई आज आफ्नो सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका छन् ।
फर्केर हेर्दा आज, वितेका पाँच वर्षको अवधिमा हामीले भूकम्प प्रतिरोधी र आकर्षक कैयौं संरचनाहरु बनाउन सफल भएका छन् ।
पाण्डेले लेखेको भुकम्पमा मल्हमपट्टी पुस्तकले त्यो बिपत्ति को कहालीलाग्दो दिन हरुलाई सम्झाईदिने गर्दछ । तेस्तै हाल नेपालमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ ।
जसबाट बच्न उनले दिनहु जस्तो आफ्नो सामाजिक वालमा स्टाटस, राख्ने गर्दछन । नागरिकले जसलाई फलोअप गरेका छन् बहने हार्दिक आभार र आफुहरुलाई उर्जा मिलेको बताउछन ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनमा परेका जो कोहि नागरिकलेपनि चिन्ता नगरी बस्न र मनोबल ठुलो बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
विगतको महामारी दैविक प्रकोपले तहसनस भएको भौतिक आर्थिक ,स्वास्थ्य संरचना जसरि उठ्यो तेसरी नै यो एक महिनाको लकडाउनको नोक्सान पनि आत्मनिर्भर भई उठाउनसकिने तर तेस्को लागि पहिलो मानव जीवन अमुल्य रहेको पाण्डेले सबैमा बताएका छन् ।
दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय,
जिल्ला भरिका क्रियाशील पत्रकारलाई नगर प्रमुखको सेनिटाइजर सहयोग,